ngu admin nge-20-08-05
Abasebenzi baya kuziqhelanisa nomsebenzi wokumba umlilo kumzi-mveliso ngombane abacimi-mlilo. Injongo yoku kufundisa bonke abasebenzi iinkqubo ezifanelekileyo zokufuduka kwisakhiwo kwinyani yomlilo wobomi okanye imeko yongxamiseko. Ukuqhutywa komlilo yindlela yokuqhelisela indlela yokukhutshwa kwesakhiwo kwindawo ...
Ukuqwalaselwa ngaphambi kokusebenzisa ibhetrigerjaja okanye uMlondolozi
1. IMIYALELO YOKHUSELEKO EBALULEKILEYO 1.1 KHAWULELA IMIYALELO-Incwadana yemigaqo inemiyalelo yokhuseleko ebalulekileyo kunye nokusebenza. 1.2 Itshaja ayenzelwe ukuba isetyenziswe ngabantwana. 1.3 Musa ukuyivelisa itshaja kwimvula okanye ikhephu. 1.4 Ukusetyenziswa kwesincamathiselo esingacetyiswanga okanye esingathengiswa ngumenzi ...
Ukhuphiswano lobuchule lwe-5 lwe-elektroniki kwi-Tonny Cup ngo-2020
Ukuze kuphuculwe ubuchule bobuchwephesha kunye nezakhono zokusebenza, inkampani yenze imeko entle ye "Funda itekhnoloji, izakhono zokuziqhelanisa, yingcaphephe wenze igalelo", ngaxeshanye ukudala inkcubeko eqinileyo yobuchule, ubuchule be-5th yeNdibano ye-elektroniki. Com ...
Iinkqubo zokuLondolozwa kwebhetri yeLithium kunye noKhuseleko loKhuseleko
ngu admin nge-20-08-04
Ushwankathelo lomngcipheko luhambelane ne-UN38.3 kwiNcwadana yokuHlolwa kunye neeNdlela zokuPhononongwa kwiiThuthi zeZinto eziNgozi. isixhobo. Izifundo. Kulumkele ukunxibelelana ngokuthe ngqo neziqulatho zebhetri kwaye uthintele ukuphefumla ukuvuza kwamachiza kunokubangela ukonakala. Umatshini webhetri okanye umbane ...